Réponses pour «tokony»:
Ho an’ny mpampilalao Tokony hahazo sy hahalala tsara ny lalao.
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY 94%
Ekena hoe maro tokoa ireo DOA tokony atao mandrapahatapitr’ity volana ity saingy ireo zakan’ny daholo be ihany no anjaran’ny KORBATANE fa maro ireo boky ahitana an’ireny DOA lava be ireny ankehitriny ka inoana fa tsy manahirana ny mahita sy mahazo azy ireny ho an’ireo rehetra izay liana .
DEPLIANT RAJABO 2018 93%
» IREO ASA FANOMPOANA TOKONY HATAO Ny fifehezana dia ahazoana valisoa goavana sy maro tokoa.
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016 93%
TSY KI-VADIVADY FA TENA IZY 92%
Vao kely izany ny zaza dia tokony zarina sahady hifampikasoka amin’ny olona samihafa.
Hatraiza ny halalanin’ny fakan’ireo lohahevitra ireo ka tokony hitandremana ny fefiloha tsy hampitrosona antsika intsony eo amin’ny lalan’ny Tantara ?
Boky torolalana momba ny fananan-tany 87%
BOKY TOROLALANA FANANAN-TANY INONA NO TOKONY HO FANTATRA?
Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 86%
Fifantenanana	Ny	mpanakanto	dia	hoantsoina	manokana	ka	tokony	hametraka	ny	asa	tanany	izay	voafidy	handray	anjara	any	amin’ny	Café	de	la	Gare	ao	Antananarivo	ao	anatin’ny	fe-­‐potoana	holazain’ny	BMOI	aminy	mandritra	ny	antso.
malagasy how satan stops our prayers 86%
KORBATANE 5 version 2016 colour 85%
KORBATANE 5 NY VOLANA MASINA SHAABANY 84%
doa ramadhany 83%
ireo fanao mandavantaona koa tsy tokony hadinoina :
Ireo nosy kely ireo dia tokony hiverina tanteraka amintsika Malagasy, na dia nohon’ny lalàna mifehy ny fari-piadidiana ara ekonomika (« Zones Économiques Exclusives ») fotsiny aza.
FITSIPIKA TOSIK'ART 83%
Zavatra roa lehibe àry no tokony ho ao an-tsaina raha manonona ity andininy ity.
Mbola ao anatiny koa ny fanitsakitsahana ny zo maha vady sy maha olona, ny famerana ny fahafahana tokony ho sitrahana ary ny tsy famelana hiteny na hampiseho hevitra.
METHODE DE DISSERTATION EN PHILOSOPHIE - Tsiky Marcel 80%
Tsy afaka manohitra na manampiditra ny hevitrao manoloana an’io aloha ianao fa milaza fotsiny izay tokony ho heviny.
Article GBUT n°02 2014 77%
Ny fiainana anatin’ny ota sy filalaovana fakam-panahy dia tsy tokony ho fiainan’ny kristiana akory.
L'amour de Dieu 75%
Article GBUT 2014 73%
Aoka anefa havahana tsara ny hafanam-po amin’ny fivavahana sy ny legalisma (= tokony hivavaka 30 minitra isan’andro ny kristiana noho izany dia tokony hanao izany aho).
Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020;filename*= UTF-8''Nouveau pgrm Tle version consultation mars 2020 72%
– ny foto-kevitra mpandinika/ mpanoratra Teny fampidirana ary afaka mitsikera - Famelabelarana amin’ny fomba  Tsy tokony hijanona amin’ny - Teny famaranana mirindra.